कोरोना संक्रमण भएर अस्पतालमा रहेका अमिताभ बच्चनलाइ अचानक के भयो ? उनले अस्पतालबाटै भने, ‘मलाई साथ दिनूस् भगवान !’ – live 60media
कोरोना संक्रमण भएर अस्पतालमा रहेका अमिताभ बच्चनलाइ अचानक के भयो ? उनले अस्पतालबाटै भने, ‘मलाई साथ दिनूस् भगवान !’
एजेन्सी – बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनले आफ्नो कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको भन्ने खबरमा सत्यता नभएको बताएका छन्। अमिताभले ट्वीट गर्दै उक्त समाचार गलत, गैरजिम्मेवार र फेक भएको बताएका हुन्। यसअघि भारतीय भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले अमिताभ बच्चनको कोरोना परिक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको र अब एकदुई दिनमै डिस्चार्ज हुने समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए। तर अमिताभले भने ट्वीट गरेर ती समाचारहरु सत्य नभएको भन्दै खण्डन गरेका हुन्।
← काठमाडाैँकाे मुटु असनमा पसल गर्दै आएका एक पुरुष र महिलालाई कोरोना संक्रमण
काठमाडौंको अति ब्यस्त असन र कालिमाटिका ब्यापारीमा कोरोना पुष्टि →